Ububanzi obusha beHuawei MateBook D namahedifoni amasha weFreeBuds 3 abomvu | Izindaba zamagajethi
Besiseku- «roundup» kwezindaba ukuthi inkampani yase-Asia isilungiselele lo nyaka we-2020 futhi azimbalwa. Siqala unyaka nge IHuawei ivuselela iphothifoliyo yayo yamalaptop ngeMateBook D14 neMateBook D15, kanye nohlelo olukhethekile lwe "Valentine's Day" lweFreeBuds 3 yayo. Ngaphezu kwalokho, uHuawei usishiyele ibhomu, futhi kwenzeka ukuthi ngesikhathi seMobile World Congress ezoba ngoFebhuwari eBarcelona bazokwethula i-smartphone entsha ezosishiya sonke singakhulumi, bazobe belungiselela ini? Ake sibheke le mikhiqizo emisha.
1 I-MateBook D14 entsha ne-D15
2 IHuawei FreeBuds entsha 3
3 UPablo Wang ucacile: sizoqhubeka yebo noma yebo
I-MateBook D14 entsha ne-D15
Womabili la madivayisi anezikrini zokuxazulula ezigcwele ze-HD (1920 x 1080px) nama-engeli wokubuka ayi-178º ngenxa yephaneli layo le-IPS. Sikwazile ukuqinisekisa bukhoma ukuthi zihamba kahle impela, empeleni lolu phiko luhlole kumcimbi weHuawei ukuthi iyunithi ibinephaneli yokuthinta ebisivumela nokuthi sisebenzisane ngedivayisi yeselula ye-Huawei esemsebenzini inqobo nje uma ine-EMUI 10 efakwe njenge-firmware. Simangazwe ngokumangazayo ngalolu hlu olusha lwama-laptops we-ultralight we-Huawei abonakala engenayo imbangi ngokwamanani anikezwe izici zawo.
Zibekwe ku-all-aluminium unibody chassis (eshibhe kunayo yonke 'yohlobo lwayo'), futhi ikakhulukazi ibhekisa kusibonisi sayo esisha se-Full View, esingu-4,8mm kuphela ku-MateBook D14 naku-5,3mm ubukhulu. Kunguqulo ye-MateBook D15. Kodwa-ke, into ehlaba umxhwele kakhulu futhi okungena kakhulu emehlweni yiphaneli layo elisha elihlala ku- U-87% wangaphambili uma kuba yimodeli engu-15 inch no-84% kumodeli oyi-14 inch. Qaphela ukuthi imodeli engu-15-intshi empeleni ine-15,6, ngakho-ke isondele kuma-intshi ayi-16 amanye ama-brand asevele enyuka.
Lezi zinhlobo ezintsha zombili zine-processor I-AMD Ryzen 5 3500U, engeyona inoveli ikakhulukazi kodwa eyanele ukuyenza ngamandla ngokuvamile adingekayo ngaphandle kokukhulisa ukusetshenziswa kwebhethri. Bobabili bazohambisana I-8GB ye-RAM iyanwebeka ibe ngu-16GB ngokuzikhethela komthengi, kuyilapho iMateBook D14 izoba ne-512GB SSD kusukela ekuqaleni, kuthi iMateBook D15 ibe ne-256GB yesitoreji kunguqulo yayo esezingeni. Kepha akuzona kuphela izinto ezintsha, sithola kuzo uhlelo lokuthungela ngomlilo izigxivizo zeminwe que kuzosivumela ukuba sibe setafuleni ngemizuzwana eyi-9 njeNjengoba siyicindezela (icishiwe) futhi ngaphandle kwesidingo sokufaka idatha eningi.
Okusho ukuthi, igcina izigxivizo zeminwe yethu kuleyo mizuzwana ukuvula nokungena ngemvume ngisho nangaphandle, kuyamangaza impela. Kuyaphawuleka ukuthi yize "i-veto" ebekwe nguDonald Trump, la ma-laptops anakho Windows 10 njengokujwayelekile, kanye namakhono wokuxhuma I-Huawei OneHop ungalindela kusuka kudivayisi yomkhiqizo. Kuphela ngokubeka i-terminal yethu ehambisana nalobu buchwepheshe (ikakhulukazi i-EMUI 10) lapho sizokwazi khona ukubona isikrini seselula esikwi-laptop ngesikhathi sangempela futhi sikwazi nokuxhumana naso kalula. Kubalulekile ukusho ukushaja kwayo nge-USB-C nge-compact size 65W adaptha (isigamu sehora usuku lonke lokusetshenziswa).
IHuawei FreeBuds entsha 3
IFreeBuds 3 inikezwe umbala obomvu we-carmine ukwamukela uSuku Lwezithandani (ngoFebhuwari 14 ozayo). Lawa maFreeBuds 3 abomvu manje aseyatholakala ku-Amazon kusuka ku- € 179 futhi ezinsukwini ezimbalwa ezizayo bazophinde bavele nakwezinye izitolo ezifana neWorten, MediaMarkt kanye ne-El Corte Inglés. Kuyisipho esihle futhi kuphuma kancane ekuqhubekeni kwamanye amafemu awanikezayo maqondana nalolu hlobo lomkhiqizo, imibala emhlophe nomnyama. Lokhu kubomvu kumnandi ngokwengeziwe futhi kukhanya ngokukhanya kwaso, ngakho-ke sizokwazi ukuzihlukanisa nabanye.
Lawa mahedfoni abonakala ngokuba ne-latency ephansi kune- 190ms sibonga iprosesa yayo yaseKirin A1 esivele isetshenzisiwe ngokwesibonelo ku-bestseller Huawei Watch GT2. Ngokuphathelene nokuzimela, banikela ngamahora ama-4 wokudlala ngokushaja okukodwa, ukushaja okusheshayo kwama-70% ngemizuzu engama-30 kuphela namahora angama-20 wokudlala kucatshangelwa leli cala. Lawa amanye ama-headphone we-TWS amahle kakhulu esiwabonile emakethe futhi afaka ukukhanselwa komsindo okusebenzayo. Hlala ubukele isiteshi sethu YouTube nesigaba sethu se Izibuyekezo ngoba lapho ungabona ukuhlaziywa ngokujulile.
UPablo Wang ucacile: sizoqhubeka yebo noma yebo
Sibe nenkampani ye- UPablo Wang, uMqondisi weHuawei Consumer Spain okucacisile ukuthi inkampani yakhe izohlala kulo makethe yebo noma yebo, ukwenza ukufihlakala okumboziwe ngentshisekelo kaDonald Trump yokubeka izithiyo endleleni yeHuawei, inkampani ebekwe njengenye yezindawo ezinamandla kakhulu ekuthengiseni eChina. Kusishiyile nemfihlakalo, okusikhumbuza ukuthi iHuawei izokwethula idivayisi entsha eMWC.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ibanga elisha leHuawei MateBook D namahedifoni amasha we-FreeBuds 3 abomvu
Ukukhishwa KwangoMashi: I-iPhone 9, i-iPad Pro, iMacBook nokuningi ...